အရငျးအနှီးရှိမှ အလုပျထလုပျမယျဆို သသှေားရငျတောငျ လုုပျခှငျ့ရမှာမဟုတျဘူး. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » အရငျးအနှီးရှိမှ အလုပျထလုပျမယျဆို သသှေားရငျတောငျ လုုပျခှငျ့ရမှာမဟုတျဘူး.
အရငျးအနှီးရှိမှ အလုပျထလုပျမယျဆို သသှေားရငျတောငျ လုုပျခှငျ့ရမှာမဟုတျဘူး.
Posted by Mon Lay on Jun 27, 2020 in Business & Economics, Ideas & Plans, Think Tank |0comments
လူတိုငျးကပွောကွတယျ..စီးပှားရေးတဈခုလုပျခငြျ တယျ။ အရငျးအနှီးမရှိဘူးတဲ့။ အရငျးအနှီးငှမေရှိလို့..ပုံမှနျဝ◌နျထမျးဘဝ လေးနဲ့ပဲ အဆုံးသတျနရေတယျတဲ့။ သူမြားပေးတဲ့ လစာလေးနဲ့ ကြနေပျနရေတယျတဲ့။ အမှနျက အလုပျတဈခုစလုပျမယျဆို အရငျးအနှီးက အရငျအရေးကွီး မဟုတျတာ။ 👉လုပျခငြျစိတျရယျ.. တဈနေ့ အောငျမွငျရမယျဆိုတဲ့စိတျရှိဖို့ပဲလိုပါတယျ။ 👈 မှနျလေး ကိုယျပိုငျ အတှေ့ အကွုံတဈခုနဲ့ ပွနျရှယျမယျနောျ။
မှနျလေးအခုလုပျနတေဲ့အလုပျတဈခု…အမြားက လုံးဝကဲ့ရဲ့ အပွဈတငျ..ဒါလုပျနိုငျမှာပါမဟုတျပါဘူးဆိုတဲ့ အလုပျတဈခုကို လှနျခဲ့တဲ့ ၆နှဈလောကျကတညျးက လုပျခဲ့တာ..အခုဆို သူမြား
အဲ့လိုဝ◌ငျငှကေောငျးအောငျ..မှနျလေးရငျးခဲ့တာတော့ အခြိနျ တဈခုရယျ…လူအားရယျ…ငှကေစိုကျရုံတငျလေးစိုကျခဲ့တာ။ သူမြားတှလေို…ရုံးခနျးတှဖှေငျ့..ပစ်စညျးတှအေမြားကွီးstockကိုမထားဘဲ..လူအားပဲသုံးပွီး လုပျခဲ့တဲ့လုပျငနျးတဈခုပေါ့။
မှနျလေး DBA တကျတုနျးက ဆရာပွောဖူးတာရှိတယျ..💲စီးပှားရေးတဈခုလုပျတော့မယျဆို အကွှေးနဲ့ရတဲ့ စီးပှားရေးလုပျရရငျ အကောငျးဆုံးပဲတဲ့..အဲ့တုနျးကသိပျနားမလညျခဲ့ဘူး။ အခုမှ သခြော
ပွနျစဉျးစားတော့ မှနျလေးအခုလုပျနတေဲ့လုပျငနျးကို အကွှေးနဲ့ရလို့ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျက အိတျစိုကျတာမြိုးမရှိဘဲ ဝ◌ယျသူရှာ အောျဒါစကောကျခဲ့တော့ အခုဆို ငှစေိုကျနိုငျလာ တော့ လကျကားထိဖွနျ့နိုငျနပွေီပေါ့။ အဲ့တုနျးကဆို အရငျးအနှီးစိုကျဖို့ အိမျကလညျးမတောငျးခငြျ၊ ကိုယျ့မှာလညျး သိပျမရှိတော့ အောျဒါကောကျရလို့ ၁လုံးဆိုလညျး ဒိုငျကနသှေားယူတယျ။ ၂လုံးဆိုလညျးသှားယူတာပဲ။ ဘယျလောကျပဲပငျပနျးပငျပနျး. .မိုးရှာရှာ၊နပေူပူ သှားယူတော့ ဒိုငျကတောငျ ကိုယျ့ကို အရမျးကွိုးစားတာပဲဆိုပွီး အခုဆို ရောငျးရမှပေးတို့ဘာတို့ဖွဈလာ တယျ။ ကိုယျ့ကလညျး ပစ်စညျးကို မှနျမှနျကနျကနျပွနျအပျတာလညျးပါတာပေါ့နောျ။ Delivery company မှာဆိုရငျလညျး မကြျနှာသာရလာတယျ။
ဒီတော့ပွောခငြျတာက အလုပျတဈခုလုပျမယျဆို အရငျးအနှီးကို အရငျမစဉျးစားဘဲ အကွှေးရနိုငျမလားတှေးကွညျ့ပါ။ မရနိုငျရငျ လူအားစိုကျ ကွညျ့ပါ။ ကိုယျ့ဆီက ဘာမှမရငျးဘဲနဲ့တော့ အောငျမွငျတဲ့သူဖွဈလာမှာမဟုတျပါဘူး။
စာရေးသူ – မွန်လေး(Travel Emperor)
Mon Lay has written 394 post in this Website..